တနင်္လာ သားသမီးလေးတွေ ကို ချစ်တော့ မယ်ဆိုရ င် ဒီ (၅) ချက်ကို သိထားဖို့ လိုတယ်…. – Shwewiki.com
တန င်္လာသားသမီးလေးတွေနဲ့ ချစ်တော့မယ်၊ တွဲတော့မယ် ဒါမှမဟုတ် သင့်ချစ်သူက တနင်္လာသားသမီး ဆိုရင်တော့ ဒီအရာလေးတွေကို မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုတွေ ပိုတိုးပြီး ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးလေးကို ရရှိမှာဖြစ်လို့ပါ။
(၁) စိ တ်ကြီးတယ်
တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ကြီးချက်ကတော့ ပြောလို့မကုန်လောက်အောင် ပါပဲနော်။ စိတ်ကြီးရုံတင် မကသေးဘူး၊ ခေါင်းကလည်း အရမ်းမာပါတယ်။ သူတို့တစ်ခုခု လုပ်ချင်ပြီဆိုရင် တားလို့မရသလို၊ သူတို့ကို စိတ်ဆိုးအောင်၊ စိတ်တိုအောင်လုပ်မိရင် တော်တော်နဲ့ပြန်ပြီး စိတ်မပြေတတ်ကြတာကြောင့် အစကတည်းက သူတို့မကြိုက်တာဆို ကြိုပြီးရှောင်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ အရမ်းလည်း သဝန်တိုတဲ့ သူတွေပါ။ ချစ်သူကို အနားမှာမရှိတုန်း ဘယ်သူတွေနဲ့များ ရှိနေမလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေမလဲ၊ နောက်ကွယ်မှာပဲ ဖောက်ပြန်နေပြီလားဆိုပြီး အစိုးရိမ်လွန်တတ်တဲ့ သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာ ခေါင်းမာတဲ့သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သဝန်တိုတာကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်ပြောမှာ မဟုတ်ပဲ ကြိတ်ခံစားနေမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ ပင်ကိုယ်ခေါင်းမာလွန်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အလျောက် အမိန့်ပေးတာ၊ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ လေသံမာနဲ့ ဟောက်တာတွေလုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတိုိ့ကို တတ်နိုင်သမျှ ချော့မော့ပြီးပြောပေးပါ။ သူတို့မှားနေရင်တောင် လုံးဝသွားပြီး မဟောက်လိုက်ပါနဲ့။ ပိုဆိုးကုန်ပါလိမ့်မယ်၊ ချော့မော့ပြီးပြောရင် သူ့အပြစ်သူ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ အရမ်းကို အရွဲ့တိုက်နိုင်တဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ကို နည်းနည်းလေး သွားမကျောလိုက်နဲ့ ချက်ချင်းပြန်ရွဲ့လိုက်မယ့် သူတွေပါ။ အထူးသဖြင့် သူတို့ကို စိတ်ဆိုးအောင်၊ ဒေါသထွက်အောင် လုပ်မိတယ် ဒါမှမဟုတ် ရန်ဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံး ပြန်ချော့လိုက်ပါ။ အကြောင်းကတော့ သင်မချော့ပဲ ထားလိုက်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အရွဲ့တိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ သင်မထင်ထားတဲ့ အရာတွေကိုတောင် လုပ်တတ်လို့ပါ။ သူ့ဖက်ကတော့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ဘယ်တော့မှစချော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ အရမ်းအချစ်ကြီးတဲ့ သူတွေပါ။ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ရူးလောက်အောင် ချစ်တတ်သလို၊ သစ္စာလည်း အရမ်းရှိပါတယ်။ အနေဝေးလို့ သွေးအေးတယ် ဆိုတာတွေ သူတို့မှာမရှိပါဘူး။ နီးနီး၊ဝေးဝေး ချစ်သူကို စိတ်ထဲမှာ အမြဲထားပြီး ပေါင်းဖက်ရဖို့ တစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံထားတဲ့ သူတွေပါ။ တနင်္လာသားသမီးတွေက စိတ်ကြီးတာလေးက လွဲရင် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တဲ့ သူတွေပါ။
တနင်ျလာ သားသမီးလေးတှေ ကို ခဈြတော့ မယျဆိုရ ငျ ဒီ (၅) ခကျြကို သိထားဖို့ လိုတယျ….
တန င်ျလာသားသမီးလေးတှနေဲ့ ခဈြတော့မယျ၊ တှဲတော့မယျ ဒါမှမဟုတျ သငျ့ခဈြသူက တနင်ျလာသားသမီး ဆိုရငျတော့ ဒီအရာလေးတှကေို မဖွဈမနေ သိထားဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါမှ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွားမှာ နားလညျမှုတှေ ပိုတိုးပွီး ပိုပြျောစရာကောငျးတဲ့ အခဈြရေးလေးကို ရရှိမှာဖွဈလို့ပါ။
(၁) စိ တျကွီးတယျ
တနင်ျလာသားသမီးတှရေဲ့ စိတျကွီးခကျြကတော့ ပွောလို့မကုနျလောကျအောငျ ပါပဲနျော။ စိတျကွီးရုံတငျ မကသေးဘူး၊ ခေါငျးကလညျး အရမျးမာပါတယျ။ သူတို့တဈခုခု လုပျခငျြပွီဆိုရငျ တားလို့မရသလို၊ သူတို့ကို စိတျဆိုးအောငျ၊ စိတျတိုအောငျလုပျမိရငျ တျောတျောနဲ့ပွနျပွီး စိတျမပွတေတျကွတာကွောငျ့ အစကတညျးက သူတို့မကွိုကျတာဆို ကွိုပွီးရှောငျထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
တနင်ျလာသားသမီးတှဟော အရမျးလညျး သဝနျတိုတဲ့ သူတှပေါ။ ခဈြသူကို အနားမှာမရှိတုနျး ဘယျသူတှနေဲ့မြား ရှိနမေလဲ၊ ဘာတှလေုပျနမေလဲ၊ နောကျကှယျမှာပဲ ဖောကျပွနျနပွေီလားဆိုပွီး အစိုးရိမျလှနျတတျတဲ့ သူတှပေါ။ ဒါပမေယျ့သူတို့ဟာ ခေါငျးမာတဲ့သူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ သဝနျတိုတာကို ဘယျတော့မှ ထုတျပွောမှာ မဟုတျပဲ ကွိတျခံစားနမေယျ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
တနင်ျလာသားသမီးတှဟော ပငျကိုယျခေါငျးမာလှနျးတဲ့သူတှေ ဖွဈတဲ့အလြောကျ အမိနျ့ပေးတာ၊ ခွိမျးခွောကျတာ၊ လသေံမာနဲ့ ဟောကျတာတှလေုံးဝ မကွိုကျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့သူတိုိ့ကို တတျနိုငျသမြှ ခြော့မော့ပွီးပွောပေးပါ။ သူတို့မှားနရေငျတောငျ လုံးဝသှားပွီး မဟောကျလိုကျပါနဲ့။ ပိုဆိုးကုနျပါလိမျ့မယျ၊ ခြော့မော့ပွီးပွောရငျ သူ့အပွဈသူ ကောငျးကောငျးသိပါတယျ။
တနင်ျလာသားသမီးတှဟော အရမျးကို အရှဲ့တိုကျနိုငျတဲ့ သူတှပေါ။ သူတို့ကို နညျးနညျးလေး သှားမကြောလိုကျနဲ့ ခကျြခငျြးပွနျရှဲ့လိုကျမယျ့ သူတှပေါ။ အထူးသဖွငျ့ သူတို့ကို စိတျဆိုးအောငျ၊ ဒေါသထှကျအောငျ လုပျမိတယျ ဒါမှမဟုတျ ရနျဖွဈထားတယျဆိုရငျ အမွနျဆုံး ပွနျခြော့လိုကျပါ။ အကွောငျးကတော့ သငျမခြော့ပဲ ထားလိုကျတဲ့ အခြိနျအတှငျးမှာ အရှဲ့တိုကျခငျြတဲ့စိတျနဲ့ သငျမထငျထားတဲ့ အရာတှကေိုတောငျ လုပျတတျလို့ပါ။ သူ့ဖကျကတော့ ဘယျလောကျခဈြခဈြ ဘယျတော့မှစခြော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
တနင်ျလာသားသမီးတှဟော အရမျးအခဈြကွီးတဲ့ သူတှပေါ။ တဈယောကျဆိုတဈယောကျ ရူးလောကျအောငျ ခဈြတတျသလို၊ သစ်စာလညျး အရမျးရှိပါတယျ။ အနဝေေးလို့ သှေးအေးတယျ ဆိုတာတှေ သူတို့မှာမရှိပါဘူး။ နီးနီး၊ဝေးဝေး ခဈြသူကို စိတျထဲမှာ အမွဲထားပွီး ပေါငျးဖကျရဖို့ တဈခုတညျးကိုပဲ အာရုံထားတဲ့ သူတှပေါ။ တနင်ျလာသားသမီးတှကေ စိတျကွီးတာလေးက လှဲရငျ ခဈြသူကို အရမျးခဈြတဲ့ သူတှပေါ။